नेपाली कांग्रेस अब करिब ५ वर्षका लागि सत्ता बाहिर पुगेको छ । प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेसले देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि के गर्नेछ, के गर्नुपर्छ ? कसरी चल्छ ? आजको मूल सवाल यही हो ।
रातको ११ बज्नै लागेको थियो । बैंकर रवीना देशराजको फोन आयो । उठाएँ, प्रचलित शैलीमा नमस्कार गरें । संवादमा बढि भूमिका नबाँधी उनले प्रश्न गरिन्, ‘समाजको प्रचलित साँस्कृतिक स्तरमाथि टिप्पणी गरेकामा मलाई उभिनै नदिने भए, म के गरौं ?’ सफल बैंकर, अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत जितेकी एक प्रतिष्ठित र प्रखर महिलाले करिव आर्तनादको शैलीमा प्रश्न गरेपछि उनलाई दिने उत्तर मसँग पनि थिएन । म निरुत्तर भएँ ।
सहमतिको चाहना पाखण्ड नबनोस्
फागुन २७ को व्यवस्थापिका संसद्को अभिमत नितान्त फरक रह्यो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सत्ताशक्तिमा पुगेकाहरूले यति धेरै लोकमतको अनुमोदन पाएका थिएनन् । यिनै साथ–समर्थनका आधारमा केपी शर्मा ओलीले अहिले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गरेका छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनबाट रेल र तेल भित्रिने आशा नेपालीले गरेका छन् । चीनबाट नेपालमा रेल र तेल भित्रिने कुराको आशा गर्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै कठिन पनि छ । तर असम्भवैचाहिँ छैन ।
अपराजिता २२ वर्ष पहिले जन्मिँदा रोइनन् । उसका आँखा तेर्सिएको, नाक नेप्टो, हातखुट्टा र जीउ फितलो, औंला साना र फराकिला, कान पनि अलि सानो, अनुहार चन्द्रमा आकारको गोलो थिए । ऊ दूध चुस्न नसक्ने बच्ची थिई ।
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पदबहाल हुने बित्तिकै दुई चित्ताकर्षक घोषणा सुनाए— मधेसको धनुषासहित तीन स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने र पीडित कामदारलाई तत्काल न्याय दिन दैनिक उजुरी सुनुवाइ गर्ने ।
महिला हिंसाका घटनाहरू विविध सञ्चार माध्यमले दिइरहेका हुन्छन् । कहिले बोक्सीको आरोपमा महिला बेहोश हुन्जेल कुटिन्छे । कहिले आफ्नै अभिभावकहरूबाटै यौन हिंसाको सिकार बन्छे । कहिले आफ्नाहरूबाटै पशुसरह किनबेच हुन्छे ।